Leaders unite against Mugabe
PRESSURE on Robert Mugabe intensified last night when G8 leaders united to demand tougher sanctions against his regime in what Gordon Brown called the “strongest” sign of international condemnation.
Voting begins in Zimbabwe election
Zimbabwe holds its one-candidate presidential run-off today with President Robert Mugabe expected to orchestrate a mass turnout of voters in a show of strength designed to emphasise his hold on power.
Opposition reports escalating violence in Zimbabwe
Zimbabwe’s opposition said today it was facing escalating violence in the last days before a presidential runoff pitting its leader against long-time President Robert Mugabe.
Mugabe's opponents die in firebomb attack
Zimbabwe’s ruling regime stepped up its win at all costs election campaign with a firebomb attack that killed four opposition party activists.
Mugabe unlikely to win control in recount
Zimbabwe’s electoral commission has confirmed the results in 10 disputed parliamentary votes, making it unlikely that President Robert Mugabe’s party can wrest control from the opposition.
First Zimbabwe election recount goes to Mugabe
Mugabe's henchmen invade more farms
Militant supporters of Zimbabwe president Robert Mugabe have invaded more white-owned farms as he urged them to defend the seized land.
Mugabe set for second leadership ballott
Embattled Robert Mugabe is to run in a second round of voting for the leadership of Zimbabwe.
Mugabe 'brokering deal to stand down'
Zimbabwe’s president Robert Mugabe is considering standing down after 28 years of rule, it emerged tonight.
Zimbabwe hopes for change, but fears the worst
Zimbabwe is preparing for what many hope will be a landmark election on Saturday which will finally remove president Robert Mugabe from power.
Zimbabwe church leader in fresh appeal over asylum seekers
A Zimbabwean churchman appealed to the British government today not to forcibly send back hundreds of people who have fled from the Mugabe regime.
Zimbabwe: Thousands more shanty homes destroyed by police
Police continued demolishing thousands of shacks and vendors’ kiosks in opposition strongholds today, burning a six-mile long line of curio stalls along the road near Victoria Falls.
Mugabe party declared Zimbabwe election winner
President Robert Mugabe’s party was tonight announced the winner of enough seats to secure a parliamentary majority.
Mugabe party splits on election candidate decisions
Zimbabwe’s split ruling party has postponed the launch of its general election campaign for a week to select two remaining candidates.
While Zimbabweans starve, Grace shops
WHEN Grace Mugabe needed a new pair of shoes she did what any wife of a dictator would do — she borrowed an airliner from the country’s national fleet, flew to Europe, and picked up a pair of Ferragamo’s.
Hundreds protest Mugabe in London
Hundreds of people gathered outside Zimbabwe’s High Commission today to protest against the Mugabe government’s prosecution of opposition leaders.